Iindaba-Ukuqhubela phambili kweteknoloji yenkomfa ngevidiyo
Njengobuchwephesha obuphambili bonxibelelwano lwangoku, inkomfa yevidiyo enenkcazo ephezulu inokufunyanwa kuphela ngokufumaneka kwi-Intanethi. Ithathe indawo yohambo lweshishini kwaye ibe yimodeli yamva nje yonxibelelwano, ephucula ukusebenza kakuhle konxibelelwano nolawulo lwabasebenzisi, kwaye inciphisa iindleko zokuhamba kweshishini. Kwiminyaka yakutshanje, ukusetyenziswa kwenkomfa yevidiyo kuye kwanda ngokukhawuleza ukusuka kurhulumente, ukhuseleko loluntu, umkhosi, inkundla ukuya kwisayensi kunye neteknoloji, amandla, unyango, imfundo kunye nezinye iinkalo. Phantse igubungela zonke iinkalo zobomi.
Ukongeza, inkqubo yenkomfa yevidiyo inenkqubo yenkomfa yelizwi ivumela bonke abasebenzisi bedesktop ukuba bathathe inxaxheba kwinkomfa yelizwi ngePC, ephuma kwinkomfa yevidiyo. Okwangoku, inkqubo yelizwi ikwayimeko yereferensi yenkomfa yevidiyo esebenzayo.
Isisombululo seNkomfa ye-EIBOARD sibonelela ngeemveliso ezahlukeneyo kwimfuno yegumbi lobungakanani obuhlukeneyo njengegumbi elincinci, eliphakathi kunye negumbi elikhulu. Abasebenzisi banokukhetha isixhobo esahlukileyo ngokobungakanani begumbi lokuhlangana. Asixhasi nje kuphela iKhamera okanye i-Speakerphone, kodwa kunye nesisombululo esidibeneyo senkqubo yenkomfa yevidiyo eya kwakhiwa kwinqanaba elinye. Yiza kunye ne-EIBOARD Conference Solution ukuze ukonwabele amava okugqibela enkomfa yevidiyo.